AjudaLinux! Version 0.2.0! | Avy amin'ny Linux
rogergm70 | | fampiharana
Androany aho eto mba hampiseho aminao ny fampiharana farany nataoko, AjudaLinux! Araka ny efa notsoahanao, dia programa izay manome fampahalalana ilaina amin'ny mpampiasa vao.
Amin'izao fotoana izao dia ho an'ny Debian ary ny derivatives (endrika .deb) ary mampiasa tranombokin'i Prawns 3. Nanomana mpiorina automatique aho raha tsy kamo ny manoratra baiko.
Amin'ity tetik'asa ity dia mikasa ny hamorona zavatra mampitambatra ny fiaraha-monina aho Avy amin'ny Linux. Ny soso-kevitra sy hevitra rehetra dia azo alefa amiko ao amin'ny rogergm70 ao amin'ny gmail dot com.
1 marary mitsika
Avelako ho anao ny installer sy ny pikantsary sasany. Azonao atao ny misintona ny installer amin'ny Desdelinux Paste:
Sintomy ny AjudaLinux!
Omeo alàlana hanao fampiharana izy ary alefaso. Aza adino ny mihazakazaka miaraka amin'ny alalana faka.
Manomboka ny AjudaLinux!
Fampahalalana momba ny APT
Sehatr'asa Desktop sy GNOME
Fitsinjarana sy Linux Mint
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » fampiharana » AjudaLinux! Version 0.2.0!
Mahaliana ity fampiharana ity. Azo itarina betsaka izy io ary hamboarina ho fitaovana fianarana lehibe. 😉
Mahaliana ahy izany, indrindra ho an'ny solosaina misy fifandraisana miadana na tsy misy fifandraisana. Fa tsy ilaina ve ny manao azy amin'ny Internet amin'ny endrika wiki (na endrika hafa)? Angamba efa misy io (toy ny andohalambo, feno tanteraka).
Na izany na tsy izany dia tena kanto ilay izy!
Noctuid dia hoy izy:
Be loatra ny zavatra hitako ao ambadik'ilay fampiharana. Manao irery ve ianao? tsy maintsy mandreraka manangona info be izany.
Valiny tamin'i Noctuido
rogergm70 dia hoy izy:
Mpinamana roa no manampy ahy fa izaho irery no mampivelatra izany matetika.
Mamaly an'i Rogergm70
Rehefa apetrako ao amin'ny linux Mint dia manome fahadisoana amin'ny fiankinan-doha gambas3 aho.
Raha ny marina dia te hanana fanampiana toy izao aho, raha afaka manampy ahy ianao dia misaotra anao aho.
naoty: nasionaly ihany ny mailaka
Valiny tamin'i Raidel Celma
Toa tsy hita ao amin'ny tahiry Linux Mint 16 ny fonosana Gambas 3
Nanome ahy lesoka izy io tamin'ny fametrahana azy tao amin'ny Linux Mint miaraka amin'ireo fiankinan-doha.
Tena ilaina io fanampiana io amiko satria mandray ny dingana voalohany aho.
Fanamarihana: nasionaly ny mailaka.
Andramo amin'ity: http://paste.desdelinux.net/?dl=4927
Aleo alefaso aty amiko izy ireo rgras@megasystems.esy.es
Mmmm, ny marina dia ho fampiharana tsara kokoa amin'ny QWebView ary ny atiny tianao aseho dia voatafy amin'ny html, noho izany dia ho mora kokoa ny manampy fampahalalana amin'ny fampiharana fotsiny hijerena ny fampiharana ivelan'ny tranonkala, toa ahy daholo ireo tsy mahita na inona na inona «matihanina» ny widgets. Fa tsara amin'ny resaka tsiro ny loko.
Raha atao teny hafa: ny lehilahy lehibe indrindra ho an'ny dummies.
Rehefa dinihina tokoa, mety hisy fanampiana. Hapetrako izy raha mbola tsy lafo ny PC taloha (satria omeko ho an'ny ahy izany vehivavy antitra reny).
linkaevolution dia hoy izy:
Hevitra tena tsara sy mahaliana. Omaly aho nametraka Kubuntu tao amin'ny Netbook, raiki-pitia tamin'ny KDE aho ary nitady vaovao momba an'ity tontolo ity hitako ity tranonkala ity adiny roa lasa izay ary tsy afaka mitsahatra mamaky boky aman-gazety aho. Mahagaga ny zavatra nataon'izy ireo !!! Izaho efa mpankafy «FromLinux»… .uu
Valiny amin'ny linkaevolution
Ahoana ny fitrandrahana Dogecoins (fametrahana sy fampiasana)
Mitantana mpizara OpenVZ (III)